Editor, Author at Babal Khabar
केहि अघि बलिउड अभिनेत्री पि्रयंका चोपडा र अमेरिकी गायक, अभिनेता निक जोनासबीच इंगेजमेन्ट भयो । यो आफैमा एउटा खबर हो । र, रमाइलो कुरा त आफ्नो हुनेवाला श्रीमान् निक भन्दा प्रियंका करिब ११ बर्ष जेठी छिन् । यो अपवाद हो । यो अपवाद नेपालमा प्रियंका कार्कीको दम्पतिमा पनि देखिएको हो । अक्सर श्रीमतिभन्दा श्रीमान्को उमेर बढी हुने गर्छ । बलिउडमै हेर्ने हो भने, अधिकांश अभिनेत्रीका श्रीमान् उनीहरु भन्दा निकै पाको छन् । कतिपय त दोब्बर उमेरका पनि । भनिन्छ, युवतीहरु विन्दास एवं कम उमेरका केटासँग डेट गर्छन् । तर, विवाहका लागि भने आफुभन्दा बढी उमेरकै पुरुष खोज्छन् । यसमा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा पनि गाँसिएर आउँछ । युवतीहरु अपरिपक्क युवासँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न चाहँदैनन् । बरु आफुभन्दा निकै पाको उमेरकासँग उनीहरु राजी हुन्छन् । किन होला त ? किन होला ? : उस्तै उमेरका युवायुवतीले
हामीकहाँ खुलमखुला चुम्बन गर्नु त्यती शोभनिय मानिदैन । भनिन्छ, ‘छ्या कस्तो लाजमर्दो !’ जबकी चुम्बनलाई प्रेम अभिव्यक्तको माध्याम मानिन्छ । खासगरी रोमान्टिक पल साट्नका लागि अधर चुम्बन गर्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन खासगरी पश्चिमी समाजमा छ । यद्यपि तर, एक अध्ययन अनुसार चुम्बन गर्ने संस्कार सबैतिर छैन । विश्वको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा पनि कममा मात्र चुम्बन गर्ने प्रचलन छ । जसरी परिचितसँग भेट्नसाथ नमस्कार आदनप्रदान गर्छौं, ठिक उसैगरी पश्चिमाहरु चुम्बन साटासाट गर्छ । अर्थात त्यहाँ सामाजिक सद्भावको एक अभिव्यक्ती मानिन्छ, चुम्बनलाई । साथीभाई, इष्टमित्र, आमाबुवा, छोराछोरी, श्रीमान्-श्रीमतीबीच जो कोहीसँग चुम्बन साटासाट गर्न सकिन्छ । तर, यी सबैभन्दा भिन्न हुन्छ वैंशालु जोडीबीचको चुम्बन । प्रेम जोडीहरु चुम्बनलाई एक यस्तो रसायन मान्छन् जसले दुई युवायुवतीलाई एकाकार बनाउँछ । बीबीसी हिन्दी अनलाइन
प्रेमको दुई गोरेटोमध्ये एउटा बाटो जटिल किसिमको हुन्छ भने अर्काे बाटो सहज र सरल किसिमको हुन्छ । धेरैको यात्रा सहज बाटो तर्फ हुन्छ । जहाँ केवल हाँसोमजाक हुन्छ, तत्कालै एकले अर्कालाई प्रभावित गराउने स्वभाव हुन्छ । अहिलेका धेरै प्रेम जोडीहरु प्रेमको त्यो दीर्घकालीन एवं कठिन बाटोमा यात्रा गर्ने चाहाना राख्दैनन् । यसको कारण हो यो बाटोमा हिँड्दा ढिलो गरी फल पाइन्छ । प्रेमको बाटोमा दुई किसिमको पाटा हुन्छन् । एउटा आध्यात्मिक प्रेम र अर्काे शारीरिक प्रेम । आध्यात्मिक प्रेम एउटा जटिल विषय हो र त्यसले तत्कालै परिणाम दिने गर्छ । परिणाम सकारात्मक होस् या नकारात्मक । तत्कालको लागि गरिएको यो निर्णय दीर्घकालसम्मको लागि समेत टाउको दुखाईको विषय बन्नसक्छ र नबन्न पनि सक्छ । प्रेम आफैंमा विभिन्न किसिमबाट हुने गर्छ । प्रेमलाई धेरै तहमा व्यक्त गर्न सकिन्छ । जब प्रेम शुद्ध रूपमा प्रकट हुन्छ ।
प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ ? यो प्रश्नले जवाफकर्तालाई दुई कित्तामा उभ्याउँछ । एकथरी भन्छन्, प्रेम र विवाह दुई फरक कुरा हुन् । प्रेम गर्दैमा विवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अर्काथरी भन्छन्, प्रेमको अन्तिम विन्दु भनेकै विवाह हो । जब प्रेम विवाहमा रुपान्तरण हुन्छ, तब मात्र प्रेम-सम्बन्ध सार्थक हुन्छ । प्रेम गर्नुको अर्थ बैंशालु सुखभोग मात्र होइन । त्यसैले जोसँग प्रेम गरिन्छ, उसालाई भावी जीवनसाथीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । कतिपयले क्षणिक मनोरञ्जनका लागि प्रेम गरिरहेका हुनसक्छन् । अहिले त शरीरिक सम्बन्धका लागि जोडी बनाउने चलन छ । कतिले लहडमा प्रेमी/प्रेमिका बनाउँछन् । कतिले देखासेखीमा । कतिले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि यस्तो जोडी बाँध्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रेमी/प्रेमिकाको रुपमा जोडिन आउने जो कोहिसँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, कहिले काहिँ त्यस्तै प्रेमी/प्र
वास्तवमा प्रेम यदि कसैले गरेको छ भने कसैले पनि छुटाउन सक्दैन भन्ने उदाहरण यि युवतीले दिएकी छन् । सानै उमेरमा ट्युशन पढ्न जाँदा एक युवकलाई मन पराइन् । दुवैले एक अर्कालाई माया गरेर विवाह पनि गरे । उनीहरु भा गे र विवाह गरेका थिए । तर किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेको थिएन । किशोरीका परिवारले विवाह छुटाए । त्यती मात्र होइन युवकलाई कर णी को आरोप लगाएर जे ल पठाए। उनले ५ महिना जे ल पनि भोगे । त्यती बेला केटीको उमेर १६ वर्ष मात्र थियो । ति किशोरी उनै युवकलाई माया गर्थिन । तर किशोरीका बुवाले त्यो केटालाई माया गरिस् भने मेरो मुख देख्न पाउने छैनस् भनेर चेतावनी दिए । सानो उमेर भएकाले किशोरीले त्यती बेला केही गर्न सकिनन्। तर जब उनको उमेर १८ वर्षको भयो युवकलाई जे ल वाट छुटाएर उनैसंग विवाह गरेकी छन्। यो घटना यूपीको अलीगढमा भएको हो । प्रेमीले उच्च अदालतबाट जमानत पाए पछि पनि किशोरीसंग भेट हुन सकेन ।
काठमाडौं । बेलाबेलामा विवादमा आइरहने पूर्वयुवराज पारस शाह पहिलोपटक लामो समयसम्म निर्मल निवासमा बस्नुभएको छ । तीन वर्षअघि थाइल्यान्डबाट नेपाल फर्केयता कहिले कुण्डलिनी, कहिले हरिसिद्धि र बानेश्वरको थापागाउँ त कहिले पोखरा बस्ने गरेका पूर्वयुवराज पारस पछिल्लो तीन महिनादेखि निर्मल निवासमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँकी पत्नी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह दुई छोरीको हेरचाह गर्न थाइल्यान्ड बसेको मौका छोपेर पूर्वयुवराज पारस निर्मल निवास बस्न थाल्नुभएको हो । स्रोतका अनुसार उहाँकी आमा पूर्वरानी कोमल शाह पनि कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएपछि निर्मल निवासमै बसिरहनुभएको छ । बिरामी आमाको रेखदेख गर्न भन्दै पारस पनि निर्मल निवासमै बस्न थाल्नुभएको निर्मल निवास स्रोतले बताएको छ । आफ्ना बुबा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै कारण यसअघि निर्मल निवास नबस्नुभएका पारस यसपटक भने छोरा हृदयेन्द्रसँगै आमा कोमल र बुबा ज्ञाने
काठमाण्डौ बबलखबर नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङबाहेक अरूले हाँक्न सक्दैन भन्ने धारणा जबर्जस्त बनाउन खोजिएको बताएका छन् । सिलवालले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो बताएका हुन्। ‘कुलमान असल र व्यवसायिक व्यक्ति हुन् म उनको क्षमता माथि शंका गर्दिन । तर, जुन ढंगले कुलमानबाहेक देशमा अरु कसैले प्राधिकरण हाँक्न सक्दैन भन्ने खालको न्यारेटिभको जबर्जस्त प्रयोग गरिँदैछ, यसले हाम्रा संस्था र प्रणालीलाई असफलतातिर लैजाने छ,’ सिलवालले भनेका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई ल्याउने तयारी थाल्न निर्देर्शन दिएका थिए।